ओमिक्रोन हो या भाइरल इन्फेक्शन, कसरी थाहा पाउने? – Health Post Nepal
ओमिक्रोन हो या भाइरल इन्फेक्शन, कसरी थाहा पाउने?
२०७८ माघ १८ गते ११:४२
काठमाडौं – नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो लामो अवधिमा नेपाललगायत विश्वभर भाइरसका धेरै म्युटेसनहरू पुष्टि भएका छन्। २०२१ को अन्त्यमा ओमिक्रोन भेरियन्टपछि नियोकोभ भेरियन्ट पत्ता लागेको छ। यद्यपि, ओमिक्रोन भेरियन्ट कम घातक भनिएको छ। तर, यो तीव्र गतिमा फैलिने क्षमता राख्छ।
विश्वभरका सबै देशहरूमा जहाँ ओमिक्रोनका केसहरू फेला परेका छन् त्यहाँ हल्का लक्षणहरू मात्र पुष्टि भएका छन्। वैज्ञानिकहरू ओमिक्रोन संक्रमणको लक्षणहरूको अध्ययन र लक्षणहरूमा हुने परिवर्तनहरूको निगरानी गरिरहेका छन्। यद्यपि, मानिसहरूलाई ओमिक्रोन भेरियन्टबाट हुने संक्रमणका लक्षणहरू पहिचान गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
ओमिक्रोन संक्रमण पहिचान गर्न किन गाह्रो भइरहेको छ?
ओमिक्रोन भेरियन्टका अधिकांश लक्षणहरू जाडो मौसममा हुने स्वास्थ्य समस्याहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। त्यसकारण, धेरै मानिसहरू तिनीहरू बीच फरक छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। र डराइरहेका छन्। त्यसैगरी, धेरैले यस्ता लक्षणलाई सामान्य मानेर कोभिड परीक्षण गराउँदैनन् र उनीहरुको लापरवाहीका कारण संक्रमण गम्भीर हुने जोखिम बढ्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा देखिएका लक्षणहरू साधारण भाइरल इन्फेक्सनका कारण हुन् वा ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणका कारण हुन् भन्ने कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
वोकहार्ट अस्पताल, मुम्बईका सिनियर फिजिसियन डा. प्रीतम मुनले ओमिक्रोन संक्रमण र भाइरल संक्रमणबीचको भिन्नता थाहा पाउने तरिका कोभिड परीक्षण नै भएको बताए। ‘र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा पीडितलाई कोरोना संक्रमण हुनसक्छ। तर, परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा व्यक्ति सामान्य भाइरल इन्फेक्सनबाट पीडित भएको बुझ्न सकिन्छ। एकै समयमा ओमिक्रोन वा कुनै पनि प्रकारको संक्रमण पत्ता लगाउन जीनोम सिक्वेन्सिङको मद्दत लिन सकिन्छ,’ उनले भने।
ओमिक्रोन पोजेटिभ आएपछि कसरी गरिन्छ उपचार?
विज्ञहरुले कुनै पनि दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसित भएका व्यक्तिलाई कोभिड संक्रमणको बढी जोखिम रहेको र उनीहरुलाई गम्भीर संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी रहेको बताए। परीक्षण पोजेटिभ देखिएपछि ६० वर्ष नाघेका, मधुमेह, मिर्गौलाको दीर्घरोग, मोटोपना वा एचआइभीजस्ता रोग लागेकालाई बढी अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अरूले भने कोभिड प्रोटोकल अन्तर्गत ७ दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ र औषधिको सहायताले पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छ।
यससँगै विज्ञले मानिसलाई संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन सरसफाइमा ध्यान दिन, कोभिड प्रोटोकलको पालना गर्न र फेस मास्क लगाउन पनि सल्लाह दिएका छन्।
‭‬ ‭‬ ne[email protected]